Sharaxida shakiga: Keydadka LMDE | Laga soo bilaabo Linux
Cadaynta shakiga: Meelaha LMDE keydka u ah
Sidii aan u daabacnay Oktoobar 21, 2011, waxaan go'aansanay inaan abuurno qayb la yiraahdo: Aragtidaada ayaa la tiriyaa <° Linux, halkaas oo aan ku daabici doonno emayllada ay adeegsadayaasha qaar soo direen iyagoo soo gudbinaya mowduucyo xiiso leh foomka xiriirka.
Waa hagaag, qayb kale ayaa hadda dhalatay oo la yiraahdo: Sharaxida shakiga <° Linux, halkaas oo aan kaga jawaabi doonno qaar ka mid ah su'aalaha kuwa adeegsadayaasha ah ee noo yimaada, wixii su'aalo ah guud ahaan.
Waxaan halkaan ku soo daabici doonnaa kuwa aan aaminsanahay inay daneynayaan qof walba, sida kiiska midkan oo isticmaale uu ugu yeeray: Erithrym.
Waad salaaman tihiin, waxaan lasocday baloogyada maalmo kooban, waana mid dhameystiran, laakiin waxaan qabaa su'aal.
Waxaan ahaa isticmaale LMDE ficil ahaan tan iyo markii ay soo baxday, maxaa yeelay waxay umuuqatay mid aad uga qurux badan Linux Mint, oo ahayd distro aan horey u isticmaali jiray. Waxa kaliya ee aanan jeclayn ayaa ah in xirmooyinka badankood ay yihiin kuwo aan cusbooneysiin.
Miyaad kugula talin kartaa liis deggan oo la cusbooneysiiyey oo lagu keydiyo
Taasi miyay ahayd markii iigu dambaysay ee aan isku dayo xirmooyinka SID, markii aan cusbooneysiiyey xorg waxaan ku dhammeeyay khalkhalka muuqaalka garaafka ...
Aad baad ugu mahadsantahay kana xumahay dhibaatada!
Marka horena waxaan kuugu hambalyeynayaa boggan cajiibka ah!
<° Linux jawaab jawaab:
Aad baad ugu mahadsantahay amaantaada, aad ayaan ugu faraxsanahay in dadaalka aan ugu jirno inaan ku ilaalino balooggan uu waxtar u leeyahay isticmaaleyaasha kale
In kasta oo ay faa'iido tahay in lagu meeleeyo meelo gaar ah LMDE, isla mar ahaantaana waxaan leenahay (caqabad ahaan) inaan ku tiirsanaano cusbooneysiinta kooxda Linux Mint ku dar iyaga.
Marka hore, waa inaad maskaxda ku haysaa taas LMDE ma isticmaalo keydka Sid, laakiin kuwa Tijaabada Debian y Debian Squeeze. Waxaa loo maleynayaa in keydadka socda, waa inay galayaan xirmooyin cusub maalin walba muraayaddaha Tijaabada Debian, laakiin kani ammaan maahan.
Waxaad si toos ah u isticmaali kartaa keydadka Debian, laakiin waxay u badan tahay in marka sidaas la samaynayo ay jirto khalad ku tiirsanaan leh xirmooyinka ay ku jiraan LMDE.
Waxaad haysataa laba ikhtiyaar: Ama waxaad halis ugu jirtaa inaad adeegsato meelaha keydka ee Imtixaanka Debian si aad u heshid xirmooyin badan oo la cusbooneysiiyay, ama waxaad si dulqaad leh u sugtaa cusbooneysiinta inay ka soo gasho keydadka LMDE. Xor ayaad u tahay doorashada. Waxaan idinkaga tegayaa keydadka Debian:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Cadaynta shakiga: Meelaha LMDE keydka u ah
AFAIK Linux Mint Debian Edition, sida ku cad dukumiintiyadeeda, waxay 100% la jaanqaadi kartaa Debian Testing. Iyada oo wixii aan dhicin taasi ay la jirto Ubuntu; LMDE waxay ka digeysaa in bakhaarada Ubuntu aysan ka shaqeyn doonin halkaas.
Waad ku mahadsantahay jawaabta! Waa inaan sheegaa inaan u maleynayay inaan horeyba u tijaabiyay, laakiin sida muuqata maya, tan iyo markii lagu daray meelaha lagu keydiyo waxyaabo badan oo cusbooneysiin ah ayaa muuqday, in kasta oo ay isiiyaan dhibaatooyin gaar ah, maadaama ay igu qasbayaan inaan tirtiro xirmooyinka sida mint-meta-common ama Mint-meta-debian, taas oo aan u maleynayo inaysan habooneyn in laga saaro. Tan waxaa sii dheer, ka hor inta aan cusbooneysiin xorg waxaan jeexjeexay garaafka garaafka, markaa hadda waan yara baqayaa haddii aan mar kale dib u furo. Ma ahan inay dhibaato i siiso, sax?
Dhab ahaan Haddii aad rabto inaad sii wadato LMDE-kaaga si habsami leh, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho bakhaarada LMDE. Waxaa laga yaabaa haddii aad leedahay Tijaabo, laakiin LMDE maahan sida Debian.
Dhib malahan inaan yeesho dhibaato kale intaan xal uhelayo, runti waa mid kamid ah sababaha aan u jeclahay Linux in kabadan Windows, inaan awoodo inaan wajaho mashiinka oo aan barto sida loo saxo khaladaadka laga yaabo inay leedahay, laakiin sidoo kale ma doonayo inaan u geysto waxyeello aan laga soo kaban karin iyo inaan dib u cusbooneysiiyo nidaamka qalliinka labadii ama saddexdii marba ...
Marka la eego baakadaha aan hore u soo sheegay, ma khuseeyaan? Sababtoo ah cusbooneysiinta libreoffice ayaa waliba ii sheegaysa inaan ka saaro ...
Baakadahaasi waa xirmooyin meeris ah, kuwaas oo iyagana (ama aan laga yaabaa) inay ka tirtiraan xirmooyinka kale. Waan ka furey iyaga iyaga oo aan lahayn dhibaatooyin waaweyn.
Salaan Elav. Fantastic, Waan jeclahay qaybaha cusub oo ka jawaabaya su'aashan gaarka ah: meelaha bakhaarka ah ee LMDE. Si kastaba ha noqotee (oo waxaa laga yaabaa inuu geesinimo i cafiyo!), Anigu wali ma ihi khabiir adeegsade mana aqaano waxa aan ku sameeyo keydadka aad halkan dhigatay. Waan ka baqayaa inaan taa taabto maxaa yeelay waxaan horey u soo maray dhibaatooyin igu qasbaya inaan dib u rakibo wax kasta oo aan ka soo bilaabay. Hagaag, sikastaba, aad ayaad umahadsantahay.
Ha ka welwelin. Aan aragno. Keydadka aan galiyay boostada, waa kuwa ay tahay inaad isticmaasho haddii ay dhacdo inaadan rabin inaad ka hesho xirmooyinkaaga keydka LMDE oo cusboonaysiiso laxanka Debian. Si kale haddii loo dhigo, haddii waxa aad rabto ay tahay in nidaamku uusan kharribmin oo uu u sii shaqeeyo sidii loogu talagalay (in kasta oo aanu cusbooneysiin inta badan), waa inaad xirtaan kuwan. Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad si joogto ah u cusbooneysiiso (in kastoo xirmo qaar ay la xiriiraan LMDE cadaabta tag) markaa waxaad isticmaashaa kuwa aan ku dhajiyay boostada.
imtixaanka apt-get -t rakib banshee
Ha ku dhejin karin baako xoogaa ah. Tan macnaheedu waxay noqon kartaa
waxaad codsatay xaalad aan macquul ahayn ama, haddii aad isticmaaleyso qeybinta
degganayn, in xirmooyin lagama maarmaan ah aan la abuurin ama aan lahayn
ayaa laga raray Dakhliga soo gala.
Macluumaadka soo socda ayaa gacan ka geysan kara xallinta xaaladda:
libc6-dev: Jebinta: gcc-4.4 (<4.4.6-4) laakiin 4.4.5-8 waa la rakibi doonaa
waxayna igu dhacday dhamaan xirmooyinka aan doonayo inaan ku rakibo tijaabinta sideen ku xallin karaa ?, Mahadsanidiin hore iyo tixgelin
Talo: daaqadaha si buuxda looma kordhin
Xarunta Ubuntu Software waxay soo bandhigi doontaa buugaag iyo majalado